Good — Steemkr
gold-bloger36 in esteem
ရုပ်ရှင်အမျိုးအစားများသှားစဉျ, ညစ်ညမ်းအရှိဆုံးကှဲဖြစ်၏ အနည်းငယ်အနုပညာပုံစံများကိုဝေဖန်သူများကများနှင့်ပရိတ်သတ်များထံမှထိုကဲ့သို့သော ardently ကွဲပြားခြားနားသောခံစားချက်များကိုထုတ်ယူ။ အခုတော့တစ်ဦးလေ့လာမှုအသစ်ညစ်ညမ်းတကယ်ကိုယ်ထိလက်ရောက်အမည်ရရှိသူများလက်ထပ်နေသောလွန်းသောလူတို့အားဝေစေခြင်းငှါအကြံပြုထားသည်။
porn စတင်ကြည့်ရှုသောသူသည်အိမ်ထောင်သည်ကလူကိုမကျင့်သောသူကဲ့သို့ပုအောက်ပါနှစ်များတွင်ကွာရှင်းခံရဖို့နှစ်ကြိမ်အဖြစ်များပါတယ်။ ထိုအညစ်ညမ်းစတင်ကြည့်ရှုသောမိန်းမတို့ကိုခွဲဖို့သုံးကြိမ်အဖြစ်များပါတယ်, သြဂုတ် 22 ရက်တွင်အမေရိကန်လူမှုဗေဒဆိုင်ရာအစည်းအရုံးမှာတင်ဆက်မယ့်အလုပ်လုပ်စက္ကူနှင့်အညီသို့သော်ညစ်ညမ်းစုံတွဲများကိုအတူတကွကြည့်မယ်ဆိုရင်လက်ထပ်ထိမ်းမြားပျေါတှငျလျော့နည်းအနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုရှိသည်ဖို့ပုံပေါ်ပါတယ်။ VideoCOMING UP Play ... အိမ်ဖြူတော်သမ္မတ Trump ရေးရာမုန်တိုင်းထန်ဒံယလေသ ACCOUNT ကို '' မယုံကြည်ကြပေ '' ပြောဆို အဆိုပါစက္ကူလည်းမဟုတ်လူတို့သညျအဘို့သော်လည်းရပ်တန့် porn-Watch, မိန်းမတို့အဘို့ကွာရှင်းများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုလျော့နည်းစေတယ်လေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ဆက်ဆံရေးအပေါ်ညစ်ညမ်းရဲ့သက်ရောက်မှုအများကြီးပညာသင်နှစ်စာပေနှင့်ပင်ဤမဂ္ဂဇင်းတှငျဆှေးနှေးခဲ့သနေစဉ်, ဒီပထမဦးဆုံးလေ့လာမှု-လျှင်ဖြစ်ပါတယ်၎င်း၏တွေ့ရှိချက်များကိုသက်တူရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်-ကြောင့်အိမ်ထောင်ရေးတည်ငြိမ်မှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်ပတ်သက်အောက်မှာတက်ကိုင်လော့။ အဆိုပါစာရေးဆရာ, အခြားအမှုအရာတို့တွင်အအိမ်ထောင်ရေးပျော်ရွှင်မှုကို, porn-စားသုံးမှုနှင့်အိမ်ထောင်ရေး status ကိုခြေရာခံရာအထွေထွေလူမှုစစ်တမ်းမှ longitudinal ဒေတာကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
ဒါဟာအဘယ်သူ၏ porn-စောင့်ကြည့်ကြောင်းကာလအတွင်းပြောင်းလဲအလေ့အထများသင်တန်းသားများပေါ်အတွက်အာရုံစူးစိုက်သုံးအချိန်ကာလကိုကျော်ထက်ပိုမို 2000 သင်တန်းသားများအနေဖြင့်ရလဒ်တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ဒါကပထမဦးဆုံးတွေ့ဆုံမေးမြန်းဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဒုတိယအင်တာဗျူး၏အချိန်ကအထိခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီး, ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကြည့်ရှုခဲ့ကြသူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးအင်တာဗျူးစဉ်အတွင်းပေမယ့်ဒုတိယကထပေးထားခဲ့သည့်အခါတစ်ဦးချင်းစီညစ်ညမ်းမကြည့်ခဲ့ဘူးသည်။ Read more: Porn မိန်းကလေးငယ်တစ်ဦးမျိုးဆက်ပြောင်းလဲနေပါတယ်ဘယ်လို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းပထမဦးဆုံးနှစ်ဦးကိုအချိန်ကာလအကြား porn စောင့်ကြည့်ဖို့စတင်ခဲ့သူတွေကို၏ 11% ကိုသူတို့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သည်ဒုတိယအကြိမ်အားဖြင့်ကွာရှင်းခဲ့ကြသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤသည်မှာအဘယ်သူ၏ porn ကိုကြည့်အလေ့အထများမပြောင်းလဲခဲ့ကြပေမယ့်သူကိုသည်အခြားလမ်းအတွက်အသစ်က porn-ပရိတ်သတ်တွေကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏လူများ၏ 6% မှနှိုင်းယှဉ်။ porn တစ်ကိုယ်တော်စောင့်ကြည့်စတင်ခဲ့သောမိန်းမတို့အနက်ကွာရှင်းခဲ့သူအချိုးအစားအဖြစ်တာ 16%, ဒါမှမဟုတ်နီးပါးသုံးကြိမ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ပြောင်းပြန်အနုပညာအပ်တဲ့သူအမျိုးသမီး porn စောင့်ကြည့်မှသာအလေ့အထတက်ထားရှိမည်သောသူကဲ့သို့ကွာရှင်းခံရဖွယ်ရှိအဖြစ်တတိယအဖြစ်အကြောင်းကိုခဲ့ကြသည်။ စာရေးသူဒါအနည်းငယ်ယောက်ျားနမူနာအရွယ်အစားယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်သေးငယ်လွန်းကြောင်း porn အရှုံးမပေးကြောင်းသတိထားပေမယ့် unhitched ရတဲ့၏အထီးရှောင်ကြဉ် '' အခွင့်အလမ်းတွေကို, အလေ့အကျင့်ကိုတက်စောင့်ယောက်ျားတွေမှကွဲပြားခြားနားသောကြဘူး။ အဆိုပါတွေ့ရှိချက်ကိုလည်းလက်ထပ်ထိမ်းမြားအပေါ်ညစ်ညမ်းရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကနဦးအဆင့်မြင့်အိမ်ထောင်ရေးပျော်ရွှင်မှုကိုသတင်းပို့သူကိုနုပျိုနည်းဘာသာရေးလူတို့တွင်အပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ပေါ်လာအကြံပြုအပ်ပါသည်။
ဒါဟာသူတို့ရဲ့လက်ထပ်ထိမ်းမြားပြီးသားမပျော်သောကြောင့်လူပေါင်း porn ကိုကြည့်စတင်ခဲ့ကြောင်းဖြစ်နိုင်မည်နည်း "ကျနော်တို့က porn အသုံးပြုခြင်းနှင့်ကွာရှင်းဖို့ဦးဆောင်ဆက်ဆံရေးအရည်အသွေးကိုဖွင့်စဉ်းစားကြဘူး," ဒီအချိန်နှင့်မရမယ့်တစ်ဦးလျှပ်တစ်ပြက်လွှဲပြောင်းယူဒေတာကြောင့်စာရေးသူရှမွေလသည်ပယ်ရီ, ဥက္ကလာဟိုးမားတက္ကသိုလ်မှလက်ထောက်လူမှုဗေဒပါမောက္ခဦးဆောင်လမ်းပြပြောပါတယ်။ "ကျနော်တို့က directional သက်ရောက်မှုထူထောင်အကြောင်းကိုတော်တော်လေးယုံကြည်မှုရှိပါတယ်။ " Read more: လက်ထပ်နေဖို့ဘယ်လို သက်ရောက်မှုယောက်ျားထက်အမျိုးသမီးတွေအပေါ်ဤမျှလောက်အားကောင်းခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်တန်ပြန်ကိစ္စအပေါ်ယခင်ပညာသင်ဆုပြေးကတည်းကပယ်ရီနှင့်အဓိပ္ပါယ်, ရှင်းပြနိုင်ဘူး။ အဓိကအား "ဟုသူကပြောပါတယ်, သူတို့ကတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ပိုပြီးမကြာခဏအသုံးပြုပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အစား" ကျွန်မဆက်ဆံရေးအတွက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအပေါ်ကိုမြင်ရပါတယ်အခြားအရာအားလုံး, ယောက်ျားရဲ့လက်ထပ်ထိမ်းမြားကို ပို. အဆိုးသူတို့ရဲ့ porn ကိုအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ထိခိုက်သည်ဟုအကြံပြုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကနည်းနည်းအံ့သြစရာရဲ့ ' ရငျးနှီးထက်။ " ယခင်လေ့လာမှုများညစ်ညမ်းတဲ့ဆိုးရွားလက်ထပ်ထိမ်းမြားတခုတခုအပေါ်မှာအရှိန်မြှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိကြောင်းတွေ့ပြီ: ဆင်းရဲသားတို့ကိုဆက်ဆံရေးအတွက်ခင်ပွန်း၏ပိုပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းလောင်လေ့နှင့်ပိုပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းစားသုံးလည်းဆင်းရဲတဲ့ဆက်ဆံရေးစေပါတယ်။ တချို့ကလူမှုဗေဒပညာရှင်တွေယောက်ျားတို့သည်ခက်ခဲအိမ်မှာဘဝအကြောင်းကိုနှင့်ညစ်ညမ်းပြီးတော့သူတို့ရဲ့မိတ်ဖက်နှင့်အတူဖြစ်ခြင်းထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုတစ်ခုပိုမိုလွယ်ကူလမ်းကြောင်းဖြစ်လာ, ဒါကြောင့်သူတို့ကအိမ်ထောင်မှာ disinvest ကြောင်း၎င်းတို့၏စိတ်ဓါတ်များရုတ်သိမ်းရေးတစ်လမ်းအဖြစ် porn မှလှည့်ကခန့်မှန်းသုံးသပ်သည်ပါပြီ။ ဒါဟာပယ်ရီလည်းဥက္ကလာဟိုးမားမှာဘာသာရေးဒြေအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်တယ်ဆိုတာသတိပြုရကျိုးနပ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေရှင်းလင်းပြတ်သားစွာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများဆီသို့ဦးတည်သည်သူ၏သဘောထားကို coloring စေခြင်းငှါ, သူက porn ပိတ်ပင်ဖို့ကြိုးစားနေမကပြောပါတယ်နေစဉ်, "ငါသည်အကယ်စင်စစ်ငါသည်ငါ၏လေးတွေ porn ကိုကြည့်ချင်ချင်ပါတယ်ရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်. ကိုယ်ကျင့်တရားယုံကြည်ချက်ရှိသည်။ ဒါမှမဟုတ်ငါ့ဇနီး။ သင်တို့မူကားငါပြုပြီးပြီသောစိစစ်ဖို့သင့်ရဲ့ဒေတာအောက်ကတန်ပြန်။ ငါတတ်နိုင်သမျှကြားနေဆက်လက်ဆည်းကပ်ပါတယ်။ " Perry ရဲ့တွေ့ရှိချက်ကိုလည်း porn ကိုသုံးသူတစ်ဦးဆက်ဆံရေးအတွက်လူမျိုး၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းကမျှနာမကျန်းဖြစ်-သက်ရောက်မှုရှိခဲ့ကြောင်းအစီရင်ခံတွေ့ရှိခဲ့ရသောအနောက်တိုင်းအွန်၏တက္ကသိုလ်, ထဲကကောင်တာအခြားမကြာသေးမီစက္ကူပြေး။ သူတို့ရဲ့သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏မိတ်ဖက်ရဲ့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. လွတ်လပ်သောမေးခွန်းများကိုမေးမြန်းခဲ့ကြသောသူ 430 လူမျိုး၏စစ်တမ်းတစ်ခုမှာတော့အသုံးအများဆုံးတုံ့ပြန်မှုမရှိအပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့တာပါပဲ။ Read more: porn နှင့် ပတ်သက်. သင့်ရဲ့ကလေးတွေကိုပြောပြရန်ကဘယ်လို အပြုသဘောနှင့်အနုတ်လက္ခဏာရိပ်မိသက်ရောက်မှုတစ်ခုအလားတူအရေအတွက်ကဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်နေစဉ် "ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုယေဘုယျအားဖြင့်ဟော ပြော. အ, အပြုသဘောသက်ရောက်မှုကိုပိုပြီးမကြာခဏအနုတ်လက္ခဏာ conseq ထက်အစီရင်ခံခဲ့ကြသည်
roteshin aamyoeaahcarrmyarr shar hcanyya, nyaitnyam aashisone khaellhpyiteat aanaeengaal aanupanyar ponehcanmyarr ko wayhpaan suumyarr k myarr nhaint paratesaatmyarr htanmhahtokaeshoetsaw ardently kwalpyarr hkyarrnarr saw hkanhcarrhkyetmyarrko htoteyuu . aahkutot tait u laelarmhu aasait nyaitnyam takaal kohtilaatrout aamair shisuumyarr laathtaut naysaw lwann saw luu thoetaarr way hcay hkyinn nghaar aakyaanpyu htarrsai . porn hcatain kyany shu sawsuu sai aainhtaungsai k luu ko m kyang sawsuu kaeshoet pu aoutpar nhait myarrtwin kwarshinn hkanr hphoet nhaitkyaain aahpyit myarrpartaal . htoanyaitnyam hcatain kyany shu saw meinmathoet ko hkwal hphoet sonekyaain aahpyit myarrpartaal, syagote 22 raattwin aamayrikaan luumhu bayd sinerar aahcaeeaarone mhar tainsaat m ae aalotelote hcakkuu nhanganye shoetsaw nyaitnyam hconetwalmyarr ko aatuutakw kyi maalsorain laathtaut htaim myarr pyaaw thangya lyawwnaee aanote lakhkanar saatroutmhu shisai hphoet pone paw partaal . VideoCOMING UP Play ... aainhpyauutawsammat Trump rayyrar monetine htaan dan y lays ACCOUNT ko '' m yonekyi kyapay '' pyawwso aasopar hcakkuu laee mahote luu thoet s nyyaabhhoet sawlaee rauttaant porn-Watch, meinmathoetabhhoet kwarshinn myarreat hpyitninehkyay ko lyawwnaee hcaytaal laykyaungg twaeshihkaesai . saatsanrayyaapaw nyaitnyam rae saatroutmhu aamyarrkyee panyarsainnhait hcarpay nhaint pain i maggajainn thangya shaayynhaayy hkae s nayhcain, de pahtam u sone laelarmhu- shin hpyitpartaal ၎inneat twaeshihkyet myarrko saat tuu rwal tuu pyanlaisonesaut- kyount aainhtaungrayy taingyaainmhu aapaw aakyoesaatroutmhu nhaint paatsaat aoutmhar taat kine lot . aasopar hcarrayysarar, aahkyarramhuarar thoettwinaaainhtaungrayy pyawshwinmhuko, porn- hcarrsonemhu nhaintaainhtaungrayy status ko hkyay rar hkan rar aahtwayhtway luumhu hcaittammha longitudinal day tar ko aasonepyu hkaesai . darharabhaalsuueat porn- hcaung kyi kyaungg karlaaatwin pyaungglell aalaeaahtamyarr saintaannsarrmyarr paw aatwat aarrone hcuu hcite sone aahkyanekarlako kyaw htaatpomo 2000 saintaannsarrmyarranay hpyint raladtway ko hkwalhkyamhcatehpyaar . dark pahtam u sone twaesonemayymyan darpaymae suuthoetrae dutiy aaintarbyauu eat aahkyane k aahti hkawsaungswarr hkaepyee, darmhamahote suuthoet kyi shu hkae kya suuthoetrae pahtam u sone aaintarbyauu hcainaatwin paymaae dutiy k ht payyhtarr hkae sany aahkar tait u hkyinn hce nyaitnyam m kyi hkaebhuu sai . Read more: Porn meinkalayyngaal tait u myoesaat pyaungglell naypartaalbhaallo hkwalhkyamhcatehpyaarhkyinn pahtam u sone nhait u ko aahkyanekarl aakyarr porn hcawng kyany hphoet hcatainhkae suutwaykoeat 11% ko suuthoet twaesonemayymyan hkaesai dutiyaaakyaain aarr hpyint kwarshinn hkaekyasai ko twaeshihkae partaal . isaimharabhaalsuueat porn ko kyi aalaeaahtamyarr mapyaungglell hkae kya paymaae suu ko sai aahkyarr lam aatwat aasaitk porn- paratesaattway kaeshoet hpyitkyaeat luumyarreat 6% mha nhaine yhain . porn taitkotaw hcaung kyi hcatainhkaesaw meinmathoet aanaat kwarshinn hkaesuu aahkyoeaahcarr aahpyittar 16%, darmhamahote neeparr sonekyaain hpyithkaesai . pyaunggpyan aanupanyar aaut tae suuaamyoesamee porn hcaung kyi mha sar aalaeaaht taat htarrshimai sawsuu kaeshoet kwarshinn hkanr hpwalshi aahpyit tatiy aahpyit aakyaunggko hkaekyasai . hcarrayysuu dar aanaeengaal youtyarr namuunar aarwalaahcarr yonekyi hcatehkya rasaw hpyit sayy ngaallwannkyaungg porn aashonemapayy kyaungg satihtarrpaymaae unhitched ratae eata htee shawin kyain ''ahkwngalamtwayko,alaeakyint ko taat hcawng youtyarrtway mha kwalpyarr hkyarrnarr saw kya bhuu . aasopar twaeshihkyet kolaee laathtaut htaim myarr aapaw nyaitnyam rae aakyoesaatroutmhu k n u aasaint myint aainhtaungrayy pyawshwinmhuko satainnphoet suu ko nu pyao naee bharsarrayy luu thoettwin aapyinnhtaansone hpyitpawlar aakyaanpyu aautparsai . darhar suuthoetrae laathtaut htaim myarr pyeesarr mapyaw saw kyawwngluupaungg porn ko kyi hcatainhkae kyaungg hpyit ninemainaee " kyanawthoetk porn aasonepyuhkyinn nhaint kwarshinn hphoet u saung saatsanrayy aaraiaaswayko hpw int hcain hcarr kya bhuu," de aahkyane nhaint m r m ae tait u shuttaitpyaat lwhaellpyaungg yuu day tar kyawwng hcarrayysuu sh mway l sai paal re, ukkalar hoe marr takkasolmha laathtout luumhu bayd parmawkhk u saung lampya pyawwpartaal . " kyanawthoetk directional saatroutmhu htuuhtaung aakyaunggko tawtawlayy yonekyimhu shipartaal . " Read more: laathtaut nayhphoetbhaallo saatroutmhu youtyarr htaat aamyoesameetwayaapaw imyaha lout aarrkaungg hkaepartaal dar kyount taanpyan kihchcaaapaw yahkain panyarsainsu pyay kataeek paal re nhaint aadhipparal, shinnpya ninebhuu . aadhikaaarr " hu suu k pyawwpartaal, suuthoet k taitkorai aar sar hpyay eat rairwalhkyetmyarr aatwat popyee makyaarhkan aasonepyu partaal bharhpyitlhoetlellsotot aahcarr" kyawanm saatsanrayy aatwat nyaitnyam aasonepyumhu aapaw ko myinr partaal aahkyarr aararaarrlone, youtyarr rae laathtaut htaim myarrko po. aasoesuuthoetrae porn ko aasonepyuhkyinn kyount htihkite saihu aakyaanpyu bharhpyitlhoetlellsotot dark naeenaee aan sya hcararrae ' rangya nhaee htaat . " yahkain laelarmhumyarr nyaitnyam tae soe rwarr laathtaut htaim myarr tahku tahku aapawmhar aashein myaha int aakyoesaatroutmhu shikyaungg twaepye: sainnrellsarr thoetko saatsanrayy aatwat hkainpwann eat popyee liinpinesinerar pahchcaee laung lae nhang popyee liinpinesinerar pahchcaee hcarrsone laee sainnrelltae saatsanrayy hcaypartaal . tahkyahoetk luumhu bayd panyarshintway youtyarr thoetsai hkaathkell aainmhar bhaw aakyaunggko nhaint nyaitnyam pyeetot suuthoetrae matehpaat nhaint aatuu hpyithkyinn htaat liinpinesinerar kyaaynautmhu taithku pomo lwalkuu lamkyaungg hpyitlar, dar kyount suuthoet k aainhtaungmhar disinvest kyaungg ၎innthoeteat hcatedharatmyarr rotesaimrayy tait lamaahpyit porn mha lha ny k hkaant mhaann sonesautsai parpye . darhar paal re laee ukkalar hoe marr mhar bharsarrayy dyay aahpwalwain tait u hpyittaalsotar satipyu r kyoe naut partaal . shurae yonekyihkyettway shinnlainn pyatsarrhcwar liinpinesinerar aakyaunggaararmyarr seshoet u tai saisuueatsabhawhtarrko coloring hcay hkyinn nghaar, suuk porn patepain hphoet kyaoehcarrnay m k pyawwpartaal nayhcain, " ngarsai aakaal hcainhcait ngarsai ngareatlayytway porn ko kyi hkyin hkyinpartaal shimashinhaint paatsaat. ko kyint tararr yonekyihkyet shisai . darmhamahote ngar janee . sainthoet muu karr ngar pyu pyeepye saw hcihcait hphoet saint rae day tar aoutk taanpyan . ngar taatninesamyaha kyarrnay saatlaat saee kaut partaal . " Perry rae twaeshihkyetkolaee porn ko sone suu tait u saatsanrayy aatwat luumyoe eat kyeemarrsaw aahcateaapine k myaha narmakyannhpyit- saatroutmhu shihkaekyaungg aahcerainhkan twaeshihkae rasaw aanouttine awan eat takkasol, htellk kaungtar aahkyarr makyaarsayyme hcakkuu pyay . suuthoetrae shoetmahote ၎innthoeteat matehpaat rae nyaitnyam aasonepyumhunhaint paatsaat. lwatlautsaw mayyhkwannmyarrko mayymyan hkae kyasawsuu 430 luumyoe eat hcaittam taithku mhartot aasoneaamyarrsone tonepyanmhu mashi aapyet sabhaw saungsaw aakyoesaatroutmhu shihkae tarparpell . Read more: porn nhaint paatsaat. saint rae kalayytwayko pyawwpya raan kabhaallo aapyusabhaw nhaint aanote lakhkanar riut mi saatroutmhu taithku aalarrtuu aarayaatwat k hpawhtote hkaekyasainayhcain " nyaitnyam aasonepyumhu yaybhuyya aarr hpyanghaw pyaww. a, aapyusabhaw saatroutmhu ko popyee makyaarhkan aanotelakhkanar conseq htaat aahcerainhkan hkaekyasai
esteem good-karma life new time
4년 전 via
minnowsupport70 · 4년 전
Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by gold-bloger from the Minnow Support Project. It'sawitness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It'sacompletely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.